नेपाल फोटो प्रतियोगिताः हेर्नुहोस् यस बर्षका उत्कृष्ट १९ फोटोहरु, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
नेपाल फोटो प्रतियोगिताः हेर्नुहोस् यस बर्षका उत्कृष्ट १९ फोटोहरु
काठमाडौं। फोटो पत्रकार क्लवको आयोजनामा भएको आइएमई–ग्लोबल–आइएमई नेपाल फोटो प्रतियोगिता २०७५ को उपाधि नरेन्द्र श्रेष्ठले जितेका छन् । श्रेष्ठले गत वर्ष सप्तरीको कुलारी गाँउमा बाढीका कारण मृत्यु भएका पाँच वर्षिय बालकलाइ अभिभावकले कोशी नदिमा बगाउदै गरेको फोटो यो वर्षको आइएमई–ग्लोबल–आइएमई फोटो अफ द इयर घोषित भएको छ ।
यसैगरी दिपेन्द्र रोक्काको फोटोले शिखर इन्स्योरेन्स नेपाल स्माइल विधा जित्यो भने आईएमएस डेली लाइफ विधामा सुनिता डंगोलले बाजी मारिन् । त्यस्तै अंगद ढकालले अर्घाखाची सिमेन्ट न्युज विधाको उपाधि जित्दा नेपाल टेलिकम नेचर एण्ड वाइल्डलाइफमा श्रीराम खत्रीले तथा #experiencenepal कल्चर एण्ड टुरिजममा किरण श्रेष्ठले बाजी मारे । त्यस्तै डिसहोम एक्सन स्पोर्टस विधाको उपाधि प्रतिक रायमाझीले जिते भने नेप्टोस फोटो स्टोरीमा मनिष पौडेलको फोटो प्रथम भयो ।
आईएमएस डेली लाइफमा दुर्गा राना मगरको फोटो दोस्रो तथा केशव थापाको फोटो तेस्रो भयो । अर्घाखाची सिमेन्ट न्युज बिधामा संजोग मानन्धरको फोटो दोस्रो तथा स्कन्द गौतम तेस्रो भए । नेपाल टेलिकम नेचर एण्ड वाइल्ड लाइफमा उम्मिद शाक्यको फोटो उपविजेता बन्दा हेमन्त श्रेष्ठको फोटो तेस्रो भयो ।
#experiencenepal‘कल्चर एण्ड टुरिजममा दिनेश श्रेष्ठको फोटो उपविजेता तथा अजय मानन्धरको फोटो तेस्रो भयो । डिसहोम एक्सन स्पोर्टसमा रविक उपाध्यायको फोटो दोस्रो तथा उज्वल चन्द्र बुद्धाचार्यको फोटो तेस्रो भयो । ‘शिखर इन्स्योरेन्स नेपाल स्माईलमा नरेन्द्र श्रेष्ठको फोटो दोस्रो तथा सुरज श्रेष्ठको फोटो तेस्रो भयो । त्यस्तै फोटो स्टोरीमा हेमन्त श्रेष्ठ कै फोटो उपविजेता तथा नरेन्द्र श्रेष्ठको फोटोहरु तेस्रो भयो । यी हुन् यस वर्षका उत्कृष्ट फोटोहरू -
फोटो अफ द इयर
शिखर इन्स्योरेन्स नेपाल स्माइल पहिलो, दोस्रो र तेस्रो
आईएमएस डेली लाइफ पहिलो, दोस्रो र तेस्रो
अर्घाखाची सिमेन्ट न्युज पहिलो, दोस्रो र तेस्रो
नेपाल टेलिकम नेचर एण्ड वाइल्डलाइफ पहिलो, दोस्रो र तेस्रो
#experiencenepal कल्चर एण्ड टुरिजम पहिलो, दोस्रो र तेस्रो
डिसहोम एक्सन स्पोर्टस पहिलो, दोस्रो र तेस्रो